Esi tinye FSX na Windows 8 / 8.1 / 10? - Rikoooo
Olee otú iji wụnye FSX on Windows 8 / 8.1 / 10?
Ka ịwụnye FSX (niile nsụgharị) on Windows 8 / 8.1, eso ndị a:
1- Wụnye FSX ejikari na DVD.
2- Mgbe nwụnye dị n'ofe, nri pịa «fsx.exe» (i nwere ike ịhụ ebe a: C: \_ Mmemme faịlụ (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X). Ebe a, họrọ «Ndakọrịta» tab ma ulo-window ka e gosiri n'okpuru:
3- Download 32 ibe n'ibe version nke « UIAutomationCore », Unzip faịlụ na mado ya na FSX bụ isi nchekwa (C: \_ Mmemme faịlụ (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X \_). Ọ ga-dozie nsogbu nke na-atụghị anya mkpọka nke FSX.
Ugbu a, mgbe ndị a dị nta nzọụkwụ, FSX kwesịrị anụ on Windows 8 / 8.1 na 10